Huawei P Smart +: nke ọhụrụ site na ụlọ ọrụ nwere igwe foto anọ na Snapdragon 710 | Gam akporosis
Huawei ka webatara P Smart +, ama ọhụụ emere maka ndị hụrụ foto. Ngwaọrụ a na-abịa na njirimara na njirimara teknụzụ tozuru oke. adịchaghị, na ọbụna karịa ebe ọ bụ na processor na-enye ya ike bụ Qualcomm's Snapdragon 710, nke ọhụrụ na nso nso a octa-isi SoC lekwasịrị anya na nke a.
The mobile, na mgbakwunye na nke na-eweta a chipset dị ka nke mbụ, a kwadebere ya ime ụlọ anọ (abụọ n'akụkụ nke ọ bụla), nwere akara ngosi mara mma ma mee ya nke ukwuu nke nke Huawei P20 Lite.
Na-abanye n'ime àgwà nke P Smart +, ụlọ ọrụ China ahọrọla ime ihe ngosi 6.3 inch nke diagonal 2.340 x 1.080 pikselụ mkpebi (FullHD +) n'okpuru a pụtara warara 19.5: 9 panel usoro. A na - ejide otu a n'akụkụ oke dị ole na ole ma nwee ọkwa n'akụkụ elu.
Banyere ngalaba nke teknụzụ, ekwuru maka isi ihe asatọ dị na mbụ nke ibugharị ya na Adreno 616 GPU. bia na 4GB LPDDR4 RAM, na ebe nchekwa dị n'ime nke 64GB nke ikike anyị nwere ike ịgbasa site na microSD, yana batrị na-enweghị iwepu nke ikike 3.340mAh.
Na-ekwu maka ngalaba foto, 16MP (f / 2.2) + 2MP igwefoto azụ abụọ bụ ọrụ maka ịnye anyị ezigbo mma foto. Ma, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, igwefoto ihu abụọ na - adịkarị njọ karịa: ọ na - abịa na ihe mmetụta isi ihe 24MP nwere oghere f / 2.0 yana ihe mmetụta 2MP nke abụọ. Nhazi abụọ a nwere ike inye anyị Ọnọdụ Eserese a ma ama ma ka mma na ọgụgụ isi (AI).
E kwesiri iburu n'uche na a na-ekpuchi kamera ahụ n'okpuru ọrụ dị iche iche dịnụ nke anyị nwere ike itinye n'ọrụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ, nke anyị hụrụ Qmoji 3 -ihe nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịtụgharị ihu anyị n'ime avatars-, Ndekọ Motion na-adịghị na 480fps (mkpebi amaghị), na ndị ọzọ.
Gbaa gam akporo 8.1 Oreo n'okpuru EMUI 8.2 dị ka oyi akwa nhazi, tụrụ 157.6 x 75.2 x 7.6 mm ma tụọ gram 169.
E Huawei P Smart + ga-ere ahịa site na August 2 na-esote n'okpuru a ọnụahịa nke euro 349 na ahịa Europe, ewezuga France na ,tali, nke ga-eru nanị euro 299. Ọ ga-abịa na oji na odo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei P Smart +: nke ọhụrụ site na ụlọ ọrụ nwere igwefoto anọ na Snapdragon 710